Ici nous portons tous les rêves du monde (MG) – Hakanto Contemporary (MG)
Ny anton'ny Hakanto ao Madagasikara
Ici nous portons tous les rêves du monde (MG)
Tolo-kevitr’i Joël Andrianomearisoa
“Tsy misy dikany aho.
Tsy hisy dikany na rahoviana aho.
Tsy hahay ny te ho tsy hisy dikany aho.
Ankoatra izay, vimbiniko anaty ny nofin’izao tontolo izao.”
Ny eto dia eto, avy eto isika mijery ny tontolo, avy eto isika manonofy ny tontolo. Ndao haminavina, ndao hiresaka nofy, ndao hanonofy – satria noho ny nofy no hahafahantsika mametraka tsioka vao Malagasy amin’ny alalan’ny endrika ara-fiforonan’ny ankehitrio anatrehan’ny mpanakanto sy ny endri-panehoana avy any an-kafa.
Ao anatin’ny filaza, tsy misy fomba fanehoana mihitsoka amin’ny endriny tokana. Ilay fampirantiana dia mametraka ny hamaroam-peon’ny endrika anaty lalaom-potoana miaraka amin’ny anoanony sy ny tena iziny.
Tsy mifantsika ny lisi-tsakafo. Tsy misy fefy ny lisi-tsakafo.
Ny chef Lalaina miandraikitra ny fenitra nony izy nanavao sakafo fanta-daza Malagasy anaty ngadon’ny Nofy rock an’i Kristel.
Ny hodidina dia ilay lalao, ny hamaroan-karazana, no fitsipika.
Ny roroa ho dorian’i Istanbul :mentalKLINIK mamorom-panindroany fitia vaovao, lalaom-pitia vaovao manoloana ireo volana vaovao sinoritr’i Môssieur Njo.
Anatin’ny hamaroan-karazan’ny tsipika, ilay designer tanora Domi Sanji mangaro ny taniny mifanandrina amin’i Alexandre Gourçon sy valony alinkisa.
Ramily, ilay rain’ny fakana sary Malagasy ankehitriny somary latsaka anaty fanadinoana, mahita indray ny hazavana amin’ny alalan’ny andia famantarana azy eo anelanelan’ny ngazana sy ny habetsahana ara-java-maniry. Ilay mpanakanto plasticien Donn dia mametraka ny piesiny eo anelanelan’ny nofy ratsy sy ny halefahana toy ny fiserak’ilay mpamorona sora-dihy Judith Manantenasoa ny hamamian’ny korontana tanteraka.
Izany rehetra izany dia milona anaty embona adala Malagasy amin’ny alalan’ny teny ifanaovana ara-diteratioran’i Jean-Joseph Rabearivelo sy Elie Rajaonarison.
Fihaoanana tsy nampoizina hanosika sy hanaitra.
Ny asa tanana mihaona amin’ny hira. Ny fakana sary no raoby. Ny teny lasa hosodoko. Ndao handrary ny literatiora, ndao handrehitra ny afo, ndao handihy ny mari-trano, ndao hiresaka zaitra, ndao hanafy ny ankehitrio.
Ndao hanao petakofehy ny hainahandro dia ndao hanimbolo voninkazo.
Ny nofy no tena iziko, karazana tena izy hafa. Ny nofin’Iarivo. Ny vinavinan’ny tontolo.
Eto Madagasikara isika dia manandratra ny nofin’izao tontolo izao.
Joël Andrianomearisoa. Janoary 2019
Lisitry ny mpanakanto